Onye ọ bụla hụrụ ego na-enye. Onye na-agaghị amasị iji nweta otu ihe n'ọnụ ego dị? Ke ofụri ofụri, ndị dị ka amụọ.
Ugbu a ebe a bụ ụfọdụ ozi ọma maka Spotify ọrụ. Ndị mmadụ na-eche na na ndenye aha ebubo ndị a bit elu ma ka njikere ịzụta ndị ọrụ nwere ike ugbu a-enwe obi ụtọ n'ihi na ihe ị na-aga ịhụ bụ ndepụta nke ụfọdụ na-enye dị gburugburu unu ga-enye gị a ohere iji nweta ọrụ ndị a na a ala price ma ọ bụ i nwere ike na-enweta ụfọdụ ego tinyere.
Part 1.Sites maka Spotify emekọ
Part 2.Spotify promo Koodu na ego Koodu
Part 1. Sites maka Spotify emekọ
Ụfọdụ njikọ ebe ị pụrụ ịchọta na-akpali akpali amụọ na-enye
Ebe a bụ obere listi amụọ na awade dị na 'Savingstory.com'
Valid na US
Ụmụ akwụkwọ na-enye N'okpuru a na-enye ụmụ akwụkwọ nwere ike na-50% oyi na adịchaghị ego.
Special enye (ejedebeghị oge enye) I nwere ike na-a 3 ọnwa na ndenye aha na $0.99
Free onyinye Ọ bụ a mmachi oge enye irè upto 10 July 2015. User nwere ike na-free onyinye tinyere na ndenye aha
Valid na UK
Spotify UK amụọ maka July Valid niile July, ọrụ nwere ike iji koodu mgbasa ozi na-egwu songs n'otu ntabi na-azọpụta music ka ha ngwaọrụ iji offline ọrụ. Na-na a na-enye ị pụrụ ịnụ ụtọ ihe ad-free ahụmahụ na Spotify.
£ 9,99 / ọnwa mgbe adịchaghị free n'ihi na 60 ụbọchị Ugbu a na nke a, ị pụrụ ịnụ ụtọ ụbọchị 60 nke free Spotify, pụtara ọzọ Mmefu na Spotify maka 2months.
Special enye Banye Up on Spotify na-ege ntị songs on gị na desktọọpụ na laptọọpụ maka Free. Expires 10 July 2015 (ọsọ ọsọ ị ga-adịghị amasị uche a na-enye)
Spotify on PlayStation music Gịnị ma ọ bụrụ na i nwere ike na-na-ege ntị Spotify music tracks na gị PlayStation music? Ugbu a, nke a bụ ụfọdụ oké enye.
Spotify adịchaghị € 5 na ịkwụ ụgwọ dị ka ị na-aga a-enye bụ maka niile Vodafone ọrụ. Nke a kwa ọnwa ntụrụndụ mkpọ bụ ukwuu. Http://www.promopro.co.uk/online-vouchers-tagged-with-Spotify-22491.html?promoid=1364711 ebe a ị nwere ike nweta Spotify adịchaghị na 500 MB data free mgbe ọ dị nanị € 5 kwa ọnwa. Ugbu a na nke ahụ bụ ọkụ na-enye gị apụghị ileghara anya.
6 ọnwa free ikpe Sprint ọrụ Nke a bụ oké ozi ọma n'ihi Sprint debanyere aha. Na Sprint ị nwere ike nweta a 6 ọnwa akp Spotify ikpe òtù ezinụlọ mkpọ ma ọ bụ a 3 ọnwa free ojiji maka ihe niile Sprint ahịa. Ọ bụ a mmachi oge na-enye na dị na họrọ mpaghara naanị. Http://www.retailmenot.com/view/spotify.com
40% anya na niile zuo (ejedebeghị oge enye)
Part 2. Spotify promo Koodu na ego Koodu
Free ndenye aha --- koodu mgbasa ozi: gZLHWShJPt
40% anya on zuo ---- koodu mgbasa ozi: welcome
6 ọnwa free music ----- koodu mgbasa ozi: tritiumyu
1month free-agbata n'ọsọ na caffreys ---- koodu mgbasa ozi: zCTplW8Uer
Spotify agba koodu ------ koodu mgbasa ozi: ceUyNdYtXFCPUpo
60 ụbọchị ikpe mkpọ ---- koodu mgbasa ozi: 080588
3 ọnwa na ndenye aha na $0.99
Ndị a njikọ adịghị e nyere maka ihe ọ bụla nkwado nzube, otú Nyocha nke ndị a na-enye na-adịghị ekwe nkwa.
Ụfọdụ na-enye nwere ike ghara ịbụ irè na mpaghara gị ma ọ bụ nwere ike kubie ume, biko ego ndaba n'ihu na-eji ndị Kupọns.
E nwere ụfọdụ pụrụ iche na-enye na-abịa elu na-echekwa na mmachi ka debanyere aha. Anya gburugburu i nwere ike ịhụ otu. Ọrụ nke Sprint nwere ike ịhụ mgbe na-enye na-abịa elu, ma ha na-ekubi ume n'ezie anya, na-eji ASAP na-enwe music na-arụrụ ya na egwu ngwa kere ka music ndụ n'akụkụ ọ bụla.
Part 3. Download Spotify music free na TunesGo
> Resource> Spotify> Atụmatụ maka Spotify emekọ